Kanal Istanbul လမ်းကြောင်း - သမ္မတErdoğanမှ 2011 ရှိıyla Crazy Project ındaအမည်ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Kanal Istanbul ၏ EIA လျှောက်လွှာဖိုင်သည်သင့်တော်သည်ဟုတွေ့ရှိပြီးစီမံကိန်းအတွက် EIA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။5လမ်းကြောင်းယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် [ပို ... ]
Konya Istanbul မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ဘတ်စ်ကားဆက်သွယ်မှုများ - TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးနည်းပညာနှင့်ခေတ်မီနည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ခရီးသည်များကိုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ [ပို ... ]
Istanbul Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ 2020
အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီအန်ကာရားအဝေးပြေးလိုင်းလမ်းကြောင်း ၂၀၂၀ - အင်တာကာအစ္စတန်ဘူအမြန်ရထားရထားလမ်း ၉ ရပ်သည် Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze နှင့် Pendik တို့ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ တူရကီ [ပို ... ]
Samsun Ordu မီးရထားတင်ဒါဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
ဆမ်ဆန်အော်ဒူမီးရထားတင်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်း၊ Samsun ÇarşambaÜnye Fatsa Ordu လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသောရထားလမ်းအတွက် TCDD ၏ပထမဆုံးအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သောဆမ်ဆန်အော်ဒူရထားလမ်းစစ်တမ်းနှင့်စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှု ၀ ယ်ယူရေးလုပ်ငန်း [ပို ... ]
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ for အတွက်မှန်ကန်သောအဆင့်များ
၁၀ နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ strengthen ကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းများလှမ်းနေပါသည်။ သို့သော်တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ has ရှိသည့်အတွက်အဓိကပြissuesနာ [ပို ... ]
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ 2019-2 GCC အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Memur-Sen ဥက္ကChairman္ဌ Kenan Çalışkanနှင့်ဒုတိယသမ္မတများİbrahim Uslu နှင့် Mehmet Yıldırımတို့သည် TCDD Taşımacılık A.Ş. 2019/2 Corporate Administrative Board အစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ TCDD [ပို ... ]
ဥပဒေအမှတ် ၂၅၄၇ နှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်းအတွက် Meli Regulation ၏ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးများ၊ ၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါတရားဝင်ပြန်တမ်းနှင့်“ Istanbul University ine” တွင်ထုတ်ဝေပြီးနောက်အာဏာသက်ရောက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ (၂၉၁၄) နှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ (၂၅၄၇) နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများအားအန်ကာကာတက္ကသိုလ်၏ပညာရပ်ဆိုင်ရာရာထူးနေရာများသို့ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း [ပို ... ]
တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုတင်ပြအစည်းအဝေးတူရကီ YHT ဘူတာတွင်ကျင်းပခဲ့သည်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turhan၊ စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Mustafa Varank၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး Ruhsar Pekcan၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာများနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် Ankara YHT ဘူတာတွင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Sakarya Metropolitan Municipality Sunflower Bicycle Valley သည်စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနေသည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းများကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်အမည်ပေးသည့် 'နေကြာကြာစက်ဘီးချိုင့်သည်ကျောင်းများ' စီမံကိန်းနှင့်တွေ့ဆုံသည်။ Sakarya [ပို ... ]
BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem remmamoğluကဆောင်းပါး ၁၅ ခုတွင်အစ္စတန်ဘူလ် ၁၅ တွင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော project သစ္စာဖောက်မှုစီမံကိန်းဟုဖော်ပြသော Kanal İstanbulကိုသူတို့ဘာကြောင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ Saraçhaneရှိ IMM အဆောက်အအုံရှိကင်မရာများကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် Imamoglu ကပြောကြားခဲ့သည်မှာukçaသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသောအခါပေါ်လာသည်။ [ပို ... ]
BoğaziçiYönetimAŞİstanbul Esenler ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ပြေးဆွဲခြင်းအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်တွင် Istanbul Metropolitan Municipality မှပိုင်ဆိုင်သော Martyrs (Esenler) ဘတ်စ်ကားဂိတ်သည်ထိုစီမံကိန်းအတွက်တင်ဒါတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ တင်ဒါကိုBoğaziçiYönetim A.Ş. ကရရှိခဲ့သည်။ Istanbul မြို့ပြမြူနီစီပယ် (IMM) ပိုင်ဆိုင်မှု [ပို ... ]
amomamoğlu: Channel တိုင်း Istanbul Project ကိုကန့်ကွက်သင့်သည်။
ဆောင်းပါး ၁၅ ခုတွင်ရုပ်မြင်သံကြားသည်ဘာကြောင့်ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Istanbul Metropolitan Municipality မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Ekrem Imamoglu ကသတင်းစာဆရာများ၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့သည်။ စာနယ်ဇင်းသမားတစ် ဦး ကပြောကြားသည်မှာ nasal Kalal Istanbul ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol မှ IMM ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်စီမံကိန်းအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။ [ပို ... ]